Sekuyisikhathi eside i-ubani akuyona imfihlo yokuthi sengozini yezifo ezihlukahlukene owesifazane okhulelwe kalula ongaqhathaniswa ingane encane futhi abangakwazi ukuzilwela. Into wukuthi kid ukufukamela umzimba usebenza kamnandi ukugcina nonina esizayo futhi ingane. Kodwa noma ngabe kunjalo, imikhuhlane akuzona ubuthongo, ukuze kwelashwe abandayo kubalulekile. Lesi sihloko sizosisiza wakuchaza kanjani usebenza umuthi okuthiwa "Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa futhi kungaba yingozi abesifazane. Kuzoxoxwa ngakho ngokuningiliziwe zonke izici zomuthi.
Kodwa kubalulekile ukwenza ukubhuka futhi ngokushesha ukungabaza omama abakhulelwe mayelana nokuthi ukuvumela ukwelashwa "Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa. Umuthi akugcini nje akungqubuzani, kodwa ngisho wabonisa ukusetshenziswa. Ngokungafani nezinye izidakamizwa ke kunomphumela ezithambile esiphezulu. Ngaphezu kwalokho, ke kuvunyelwe ukuba aphathwe "Ambrobene" ekukhulelweni (2 ngethemu), ngoba kuphela elwisana off amagciwane, ngaphandle kokuphazamisa amangqamuzana avamile futhi ngaphandle kwalokho sehlangano ababuthakathaka.
Uma ungakwazi ukuthatha "Ambrobene"
"Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa ayikwazi ukusetshenziswa esimweni lapho fetus ku esibelethweni sowesifazane kwakhiwa ngokushesha, futhi kokungenela yezokwelapha kungaba ngokuphawulekayo ukulimaza ukugeleza inqubo.
Ngokuphathelene iqembu kwemithi, "Ambrobene" njengoba ambroxol, okuyinto ingxenye izidakamizwa nomongo esebenzayo eyinhloko kungokwalabo ekilasini mucolytics noma, impela nje, expectorants. "Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa is zishukumisa kahle isikhwehlela kusuka emaphashini, okuyinto enomthelela ukululama okusheshayo.
You can "Ambrobene" uma lisetshenziswa sokukhulelwa uma inkambo sifo uma kukhona ubunzima bokuphefumula, nobuhlungu obukhulu emphinjeni, a osenyameni osindayo isikhwehlela kusuka nezilwanyana ezincane pathogenic ebusweni iphaphu, umphimbo kanye kuqhoqhoqho.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ngoba izilingo eziningi zokwelapha zomuthi nomthelela omubi umzimba nokuthumba owesifazane owayezithwele, awuzange ezikhonjwe, ngakolunye uhlangothi, noma yiluphi uhlobo imithi kusiza ukususa uketshezi kusukela bronchi, oyenza igazi indlela yokulawula nezilwanyana ezincane eziyingozi.
Ukunquma ukuthi hlobo luni ezihlukahlukene kusho ukukhetha, luhlala kuphela nge kowesifazane ngokwakhe - amaphilisi, powder for inhalation noma isiraphu ketshezi. Inhalation "Ambrobene" Ukukhulelwa indlela ephumelela kakhulu ukwelashwa. Umthamo ifomu ngalinye ukukhululwa kuyakhethwa luyingxenye ngabanye futhi kuncike kobukhulu izimpawu.
Ngokuqondene izinkomba esiyinhloko ukwelashwa ngalo muthi, odokotela okulandelayo:
ukucinana kwemigudu yokuphefumula, izinhlobo oyingozi futhi ezingalapheki;
umkhankaso somoya bronchial;
acute ukuvuvukala wamaphaphu kwezicubu;
bronchiectasis nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula.
Sula contraindications ukusetshenziswa "Ambrobene" yilezi:
Ukuba khona ukusabela iguliswa isithako esebenzayo.
Ukuba buthaka jikelele zomzimba, ephelezelwa khona somnolence, isiyezi kanye bekhanda.
Isifo sohudo noma ukuqunjelwa ezingalapheki.
Dry umlomo ukugwinya.
Ukuvela rhinorrhea futhi dysuria.
Kwezinye izimo, impatho kakhulu eside nale izidakamizwa kungenzeka ukuvela isiyezi, isicanucanu, ukuhlanza okuphindiwe noma nesifiso sokufuna uthulule esiswini. Ukwamukelwa izidakamizwa kuleli cala kuyadingeka ukuze ayeke futhi kudokotela ngenjongo umuthi abaqotho ngaphezulu.
Kuyaphawuleka ukuthi "Ambrobene", okusho umuntu akakwazi ukwenza kakhulu ngobudlova ku ukukhanya, kanye Imiphumela the isikhwehlela anqwabelene kungenzeka ukusho okungenani ngokuqiniseka, isibonelo, "ACC". Yingakho lesi sidakamizwa "Ambrobene" ungakwazi uphuze, ngisho nalapho ngikhulelwe.
Izindlela kwesicelo nesilinganiso
Sebenzisa imithi kumele ngokuqinile udokotela. Isikimu classical: 1 ithebhulethi izikhathi 3 nsuku zonke amahora 24. Bahlanza phansi nge inani elincane lamanzi ahlanzekile, akudingeki ukuhlafuna. "Ambrobene" (isiraphu) ekukhulelweni dosed nge 5 ml amahora 24, kuthiwa batheleka spoon wokulinganisa buhlanjululwe ngamanzi ukuqeda ubumnandi ngokweqile.
Isixazululo for inhalation ibhalwe kanje: 2 ml powder buhlanjululwe in 2 ml nosawoti. Inqubo okufanele uqhubeke kuze kufike isikhathi lapho zingeke zisetshenziswe zonke okuqukethwe isitsha. Ukuze ulungise umphumela izidakamizwa kunikezwa okungenani izinsuku 5. Esimweni lapho kwesikhathi ukwelashwa kufanele kudluliselwe nakulabo, isikhathi reception kushintshwe ngudokotela wakho.
Phakathi imiphumela emibi izidakamizwa kwabesifazane abakhulelwe bangase balwisane ubuhlungu esiswini, isiyezi, nokoma engalawuliwe. Kwezinye izimo kungenzeka amawala, urticaria nezinye izinkinga ngesikhumba esibangelwa nokuphathwa mucolytic. disorder Progressive ekusebenzeni kwesibindi nazo isiginali ukuthi "Ambrobene" ngeke kukusize ngalutho ukuthatha.
Izinkinga nokusebenza kwezinso zifakwe ohlwini kwezimo lapho ukusetshenziswa kwezidakamizwa singena mbuzo. Isibopho ukuqokwa izidakamizwa amanga ngokuphelele udokotela ukuba khona, ngakho ukuze afihle izimpawu eziyisixwayiso akudingeki naye.
isilonda esiswini, isilonda duodenal futhi kolwelwesi erosive kukhona Izimo ngqo, njengoba ngesikhathi sokukhulelwa idatha zokugula kuthiwa wawuhlanganisa.
Kuleso simo, uma umama okhulelwe akuvumelekile noma yimuphi umuthi, izidakamizwa excretion of isikhwehlela kungenziwa kalula sithathelwe indawo ukusetshenziswa esiningi uketshezi, kuhlanganise izithelo iziphuzo, berry ayo, izithelo iziphuzo nokunye.
Amaphilisi Abonayo "Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa (3 imigomo) belulekwa ukuthatha ekuseni, lapho ukwehlukana isikhwehlela kusuka emaphashini isuke isebenza kakhulu. Inzuzo kusobala zomuthi wukuthi ukuphathwa kusho ngokuvumelana ukuluthwa kuphakama. Lokhu kukuvumela ukuba ngokungesabi afeze eyodwa, kodwa ukwelashwa eziningana njalo ngezikhathi ezithile. Inhalation kuyinto efiselekayo lokufeza amahora ambalwa ngaphambi sokulala ukuze isikhwehlela uqweqwe esiye zanqwabelana ngelanga, wakwazi ukuphuma emzimbeni futhi kungaphazamisi ubuthongo. Syrup kangcono pre-buhlanjululwe ngamanzi afudumele.
Ukuze umphumela kusetshenziswa noma ifomu zomuthi kwabonakala ngokushesha ngangokunokwenzeka, sihlanganise ukuhamba kanye nokwelashwa nokuvivinya umzimba ngendlela elinganiselayo, okuyoba neqhaza ukususwa okusheshayo ngaphezulu slime zanqwabelana. Kubalulekile izikhathi eziningana ngosuku, kahle umoya egumbini, ukuze umoya egumbini kwaba njalo fresh futhi ihlanzekile.
Analogs futhi ifomu ukukhululwa
Uma kudingeka, mucolytic "Ambrobene" indawo "Mukaltin", "Ambroxol" kanye nezinye izithunywa leli qembu kwemithi.
Isiraphu nephunga elimnandi lama-raspberry has a kwe-tint kancane aphuzi. isinyathelo Secretomotoric nganoma yiluphi uhlobo lokuhlukunyezwa ukulungiselela wabonakalisa ngezimanga osolwazi abaningi emkhakheni otolaryngology. Kusho iqala isebenze kuze kuphele isigamu sehora kanye ilondoloza umphumela amahora 6 kuya ku-12. eside oyibamba amaphilisi ukusebenza isikhathi eside ukwedlula amahora 12, futhi izinsuku.
Ukusebenzisa ukulungiselela "Ambrobene" ndawonye zonke ngemithi elwa namagciwane, kungenzeka ukuba sifinyelele ukusheshisa ukwelashwa izikhathi eziningana. I inhlanganisela umhlabeleli ezibhekwa "Ambrobene" futhi "Amoxicillin", "Ceftriaxone", "Cefuroxime" noma "Tsefotoksim".
Lapho ukungenisa isidakamizwa amuncwa umzimba cishe ngokuphelele ngemva ukumuncwa e pheshana emathunjini.
Adume Den Redkliff ngokuphila kumdlali